AQOONISWEYDAARSIGA GUNDHIGGA HA’ADAHA SIYAASIGA AH – Hope Generation – جيل الأمل
Aqoon iswaydaarsi uu soo qaban qaabiyay Xafiiska Siyaasadda ee Dhallinta Rajada Soomaaliyeed (Jiilul-Amal)
Xafiiska Siyaasadda Ee Ururka Dhalinta Rajada Soomaaliyed, Jiilul-Amal, ayaa Soo qaban qaabiyay Aqoon Iswaydaarsi Cinwaankiisu ahaa (Gundhigga Ha’aadaha Siyaasiga ah).
Waxaa Mawduuca si Wanaagsan u falanqeeyay, cilmigiisa iyo khibradiisana nagula wadaagay Dr. Hassan Shekh Ali Nur Hassan Nur #Imaam, Oo ah Bare Cilmiga Siyaasadda ka dhiga Jaamacadaha ugu waawayn Magaalada muqdisho, Dhawr iyo tobankii sano ee ugu danbeeyayna siyaabo kala duwan talo iyo tusaalynba ku caawinayay dawladda Soomaaliyeed.
Dr. Hassan wuxuu aad u kala dhigdhigay waxyaabaha gundhigga iyo aasaaska u ah hay’adaha siyaasiga ah, oo kuwooda ugu muhiimsan aan ka xusi karno, #Sharciyadda Hay’adaha Siyaasiga ah (#Legitimacy) , #Awoodiyo Xoog ay wax ku fulin karaan (#Power), iyo #Habdhismeed sax ah oo wanaagsan inay u dhisanyihiin (#Structure).
Sidoo kale qaybaha danbe ee Aqoon iswaydaarsiga waxaa su’aalo iyo faalaynba ku daray qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo aqoonyahankii ka soo qayb galay barnaamijka.
Kulanka waxaa ka soo qayb galay Dhalinyaro kakala Socday Ururada Dhalinyarada ee ugu firfircoon magaalada Muqdisho, qaar ka mid Ardayda darajada 2aad ku diyaariya Diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo xubno ka socday golayaasha iyo xafiisyada Ururka Dhalinta Rajada Soomaaliyeed Hope Generation.
Xafiis ka Siyaasadda iyo dhamaan Xubnaha Dhalinta Rajada Soomaaliyeed waxay Mahadcelin ballaadhan u dirayaan, Prof Dr.Hassan Sheekh Cali oo waqtigiisa qaaliga ah noo soo huray si uu nogu faa’iideeyo, iyo dhamaan martidii nagala soo qayb gashay aqoon iswaydaarsiga.
Xafiiska Siyaasadda Ee Dhalinta Rajada Soomaaliyeed Jiilul-Amal waxa loo aasaasay si sare loogu qaado Wacyiga siyaasiga ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed, iyadoo laga faa’iidaysanayo dad ka cilmiga iyo khibraddaba u leh Siyaasadda guud ahaan, si gaar ahna Siyaasadda Soomaaliya.
Ugu danbayn Xafiisaka Siyaasaddu wuxuu u ballan qaadayaa in dhallinyarada uu u soo diyaarin doono barnaamijo ay cilmi iyo khibrad ba ka kororsan doonaan, Inshaa’allah.
Ururka Hope Generation (Dhallinta Rajada Soomaaliyeed), waa urur Dhalinyaro oo u taagan wacyigalinta, waxbaridda, wanaag u horseedka iyo soo celinta rajadii dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana lagu aas’aasay Magaalada Muqdisho sanadkii 2014.